Manyorero eCatfish Nursery - Kururamisa Catfish Kukura • Yurie BSF
Nzira yeCatfish Nursery - Kuronga Chakurima Catfish
Yurie | Dec 26, 2018 | Nzira Yokukudziridza Nayo Catfish
Nzira yekuita sei pakafu
Ndapota tibatsirei nesayenzi yemubvunzo uye mhinduro pamusoro pekushambadzira kwekaka
iyi iri mu SHARE (yakagoverwa)
kumasangano ehupfumi akadai saWa, FB, G +, Pinterest, LinkedIn Twitter nezvimwewo.
Tinotarisira kuti ruzivo urwu rugovera rudo runogona kuva mari yedu munguva yekupedzisira. Aaamiinn
Inogona kuva isina aeration here?
Nekucheka gungwa catfish pasina aeration zvingave, asi pane ngozi yekukura larva catfish inononoka.
Uye uwandu hwehove dzakachengetwa mumadziva hazvikwanisi kuva zvizhinji.
Kana pane zvakawanda zvekuti mbeu idzi dzichashayikwa mumhepo uye dzinogona kukonzera rufu.
Inofanira kunzwisiswa kuti chinangwa chekutsvaira mumvura inoputika ndechokuwedzera huwandu hweokisijeni mumadziva, kuitira kuti tigone kuwedzera huwandu hwehwanda hwema catfish mbeu mumadziva.
Nzira yekugadzirisa sei mapurisa emvura ayo akawanda emass?
Nokupa pedestal pamusoro pe catfish mapurisa. Ichi chakaita sejira rezuva rinoenda zvakananga mugomba. Saka kuti kukura kwemassi kunogona kuderedzwa.
Ita kuti mbuya uchenese nekutsva kwehondo.
Uyewo unoda kamwe kamwe pavhiki uchipiwa munyu, PK kana metalin blu. Chikamu chiduku chemuitiro unokosha.
Inonyanya kukoshesa mashekeri pamakiromita mana?
Nekuchengetedza dambudziko mukati memamita mita imwe inogona kuverengwa nokuwedzera dziva PxLxT.
Semuenzaniso, catfish mbeu dzemvura dzichienzanisa 280cm x 300cm x 25cm nehuwandu hwemvura ye10 - 15cm uye nekupararira kwemvura, dziva rinogona kugadzirisa kusvika kumicheu ye 50.000 kusvikira yava yakafanana ne2 - 3.
Chii chakanyanya kusimba kwehukuru hwe600cmx200x65cm?
Kudzidza kare kunogona kuva pakati pe500 - 1.000 muswe.
Inguva yakareba sei catfish mbeu inopiwa powder pellets kana fengli?
Mbeu dzeCatfish dzinotanga pazera remakore mana dzinogona kupiwa powder pellets asi mudiki zvishoma.
Chinangwa chekupa pellets yekudya pfupa ye catfish mapurova kuti awedzere simba kubva kumakhahydrates kuitira kuti catfish mapurova ave akareruka uye akasimba
Asi inofanira kuramba ichipiwa zvipembenene zvechilika sekugovera mapuroteni, kune avo vanonetseka kuwana zviguru zvesiriki zvinogona kuchinjwa ne maggot pasta.
Maggot paste inogadzirwa nemaggot kana maggots kana mabuva kubva black fly kana muto mutsvuku anobhururuka.
Nzira yacho iri nyore, yakafanana nekuita peta kubva kune zvisikwa zvesiriki.
Icho ndicho chikuru chakasvibirira mumhando yemaggotwe emagetsi akavhenganiswa nezvimwe zvigadzirwa zvino mu blender.
Usati washandisa, ramba uri mufiriji kwemaawa e24 kuitira kuti masikirwo emasikirwo emichero awedzere kuwedzera huwandu hwehutano hwake anogona kuva akawandisa.
Kuti uwane musanganisi wakazara, unogona kuona webhusaiti www.YurieBSF.com
Mangani magiramu e powder pellets kana fengli anopiwa kupa feedfishfish?
Pengli poda pellets inopiwa yakawanda sey gram imwe. Nzira yekufambisa inogona kupararira zvakananga kune catfish makungu.
Iwe unofudza sei mapuropa ehove, unoda kuenda kumaBibis kutanga?
Zvokudya zvinofanira kuva "mbeu" kutanga, chinangwa chekuita kuti icho chikafu chiwedzere kunze kwechizvaro chehove, kuitira kuti hove dzikurumidze kuzadza uyewo kudzivisa kuputika.
Nzira yekuzadza ndeiyi:
Shandisa mvura zvishomanana mumapfudziro, iva nechokwadi chokuti usasvibira.
Itirai kusvikira musanganiswa.
Itai kuti zvokudya zvakange zvakabhabhatidza zvibhurwe nokuda kwe 15 - 30 maminitsi kusvikira kufara kunzwika kana kunonzwa kuridza kana kuterera.
Uyezve, hove dzemakungwa dzakagadzirira kuiswa.
Paridza fodya zvakafanana. Nhamba yacho inoratidzwa zvishoma nezvishoma.
Ipa iyo kusvikira catfish maruva yakazadza, Rega kana maruva aya achiita seasingadi kudya zvakare.
Iva nechokwadi chokuti hapasi zvokudya zvakawanda zvisingadyi nemaruva. Usarega zvakawanda zvichigara pasi pegungwa izvo zvichava ammonia kana chepfu ye catfish mbeu.
Iwe unopa sei mhuka yakanaka yechilika?
Pamusoro pemigumisiro yakawanda, kupa zvikwereti kunofanira kutevera matanho anotevera:
Nhanho yekutanga, honye yekasiki yakafukidzwa pakutanga, kuitira kuti ivhu riparadzwe kwemazuva maviri kana maviri.
Zvadaro, usati washamba, chenesa mvura kusvikira yakachena zvachose.
Iva nechokwadi chokuti hakuna mhuka dzomupfudze uye mazamu esiriki pasi pegungwa rinoita kuti utsi hwemvura huderere.
Ingani kangani kudya munguva yemvura?
Kana nguva yekunaya ichipa zvokudya inogutsikana mushure mokunge mvura inomira kwemaawa maviri kana maviri, kuitira kuti zvokudya zvirege kusanganiswa nemvura inonaya.
Kana kukwirira kwemvura kwenguva yakareba, kudya kunokwana kaviri pazuva, izvi ndezvekupa nguva yekudya kudyiwa uye zviri nani kubatwa nekatfish.
Usapedza kudya kana kunaya kana kunonaya kunaya, hove dzinofudzwa kana mvura inogona kuva pangozi yekurwara.
Nokuti chikafu chave chadyiwa chichatsvairwa zvakare uye kuita dziva mvura inopisa muddy.
Chimwe chigumisiro chakaipa ndechokuti mamiriro akadai sefungi achawedzera uye anoita kuti hove dzinetseke.
Ndeipi mishonga yakanakisisa mushure mokubvisa kamuti?
Ipai fengli zero.
Iyo nzira inosaswa zvishoma nezvishoma.
Kutungamirirwa kwekaseti kuchiri kuitwa munenge imwe gramu.
Kana yakanakisisa kupa maggot pasta.
Pashure pembeu yakasimba yehove inogona kupiwa premium psc. Kana kuti kuchengetedza pane zvekudya maggot pellets high protein.
Kunze kwekuve nezvokudya zvakakwana uye mapuroteni akawanda, mari yekuita maggot pellets inodhura zvikuru, kunze kwe3.000 / kg.
Ichi ndicho chakavanzika chehombe huru yekudya, iyo inodhura asi ine nheyo inogadzirisa maggot.
Ndeapi mamwe mararamiro anopiwa anopa pakafemera nokukurumidza?
Maggot BSF, masonje, masonje.
Kuti zvive nyore uye nzira dzisingabatsiri dzokugadzira maggot pachayo, kuivhura sei paGoogle, www.YurieBSF.com
Iwe unodzivirira sei 1 - 2 catfish mbeu kubva pakuparadzira mutsvuku mutsvuku?
Chinokonzera chirwere chakachena ndechekuti dziva rinoputirwa nezuva rose uye mvura yakawanda kwazvo.
Iko maitiro ekutanga mahombekombe eganda tsvuku uye ipapo mavara machena, iyo mushroom.
Kuti udzivise dambudziko iri, pamusoro pemvura iyi inopiwa denga, kana inogona kuva nokupa mashizha ebhanana anoshanda seimba.
Ndeipi iyo inokonzera bundu riri pedyo nemapera ekupedzisira?
Bundu riri pedyo nepakinira rakagadzirwa nekuda kwemigumisiro yakaipa yezvokudya zvakasara zvinova ammonia.
Mukuwedzera, iyo inokonzerwawo nehuwandu hwemucheka pasi pegungwa.
Mhinduro ndeyokuronga huwandu hwekudya kuitira kuti zvisakanyanya kudyiwa hazvidyi uye inova chitubu chezvitubu zvehove.
Geza dziva racho nguva dzose rinosanganisira nekupa mvura kupararira kubvisa ammonia iripo.
Nei kune misi mu catfish musoro?
Chimwe chikonzero ndechokuti mvura yakanyanyisa.
Kuti ukunde izvi, shandura mvura, uye uwedzere mapurobioti.
Probiotics kana kudzivirira kunogona kupiwa nguva dzose mapaji epaya.
Kana kuti shandisa probiotics kubva kunhizha reNoni.
Iwe unogona kukopa tereji pawebsite www.YurieBSF.com
Chii chinoita kuti hove dzifambe pamusoro pemvura?
Chikonzero chehove yakasviba inogona kuva nokuti vazhinji vekudya vanopiwa, kana nekuda kwechando.
Nzira yekugadzirisa sei hove yakasviba?
Danho rokutanga nderokupa metallin blu, ipapo maawa matatu uye shandura mvura yakawanda se50%.
Danho rechipiri, iva nechokwadi chokuti zvokudya zvinotevera zvinoderedzwa, uye kutanga kunyoresa usati waipa hove.
Kune avo vese vanoisa dziva pasi pe tira yeimba.
Iva nechokwadi chokuti mvura inonaya inowira mumatairi haina kuwira pakarepo mudziva, nekuti masi mutsva ane turu.
Chii chinokonzera mabhudzi matsvuku mumudumbu pedyo nepatipi?
Chikonzero chinonyanya kukonzera chirwere ichi chiratidzo chokudya zvakanyanya.
Kudyisa zvakanyanya kuchaita kuti nzvimbo dzakawanda dzisara dzigadzire pasi pegungwa rakasanganiswa nehove mucus uye kuva mbeu dzezvirwere.
Mhinduro ndeyokutarisa kuburikidza nechitsiko chepasi chegungwa. Uye ipai mugove wezvokudya usina kupararira kana kupararira zvakapararira.
Zvakanaka kwete kuwedzera kupisa?
Zvakanaka chaizvo, kuwedzera zvinonhuwira nenzira yeginger kana ginger kana garlic kana betel mashizha ayo akabikwa zvikuru anobatsira kuwedzera hove yakasimba.
Aya maitiro echisikiwo akanakawo seprobiotics chaiwo.
Iwe unobata sei nekumira pakafish?
Heano dzimwe nzira dzokubata nayo catfish mumire:
Dzinga padziva pasi pemvura.
Kusiyanisa kambani yekukanda
Kushandisa 3-5 white bottom cloves uye usasese pane catfish pond
Fukisa hove yemunyu mumakungwa echifishfish.
Fukidza nemishonga yebhuruu mu catfish pond.
iyo nzira iri pamusoro apa zvakare mushonga wokukunda catfish mucus inopera, mvura inonaya nyore nyore kana inonhuwa.
Mazuva mashomanani mushure mekuvhara mbeu dzechikafu zvinosarudzwa?
Ita yekutanga kutanga kwemazuva 15.
Asi zvinotorwa zvinokwana bendolan kana kuti plentongan chete.
Mazuva mashanu gare gare, inguva yekusarudza.
Usarongedza hove dzose pasi pezera re 15 pazuva, izvi zvinogona kuva pangozi yehove rufu.
Mazano & Tricks
Iko yakakwirira sei mvura yakakodzera ye catfish hatchery?
Mvura yemvura haifaniri kudarika 20cm.
Muvara wemvura tsvuku yakanaka kune catfish here?
Chero bedzi kuwedzera kwehove chaiyo hakusi dambudziko.
Kana izvo zvinoitika zviri nani, zvino ita mushonga unogara uine probiotics.
Iwe unoita sei kuti 3-4 catfish mbeu dzirege kufa nyore?
Iwe unoita izvi nekuita kuti dziva racho rionekwe kwezuva, uye rega ¼ chikamu chechidziva chifukidzwe nemashizha ebhanana somuenzaniso.
Kana huri padziva risina denga uye kuita kuti dziva rive pachena kune zuva zuva rose, zvino ita shanduko yemvura yakawanda se30 - 50%
Ko mbeu inogona kukura sei?
Nzira iri nyore ndeyokupa mbeu dzine utano, kudya kwakakwana uye mapuroteni akawanda.
Asi kana iwe uchitenga zvokudya nezviyero izvi muchitoro, haungakwanisi kudya mari.
Saka iyo inofanirwa kunge inofanirwa kuve yekuita iwe pfuma yako iyo inokodzera zvido zvemakwenzi echikafu pane mari shoma.
Izvo zvakafanana nemagetsi kana magog kana maruva muto mutsvuku anobhururuka.
Iyo nzira ndeye apo hove yakasviba ine mazuva mana akare, iyo maggot inodzwa kana kuiswa pamwe uye inopiwa ku catfish mapurova.
Ipai zvakaenzana kuitira kuti mapoka ose ehove awane zvikamu zvavo.
Simudza kakaban kuitira kuti maggot paste yekudya irege kusunga uye kugadzirisa.
Unodzorera mvura yakawanda sei?
Kudzorerwa kwemvura kunofanira kunge kunobva mumamiriro emvura. Nokuti nharaunda imwe neimwe ine mararamiro akasiyana emhando yemvura.
Nzvimbo yemvura inofanirwa kuchinjwa pakarepo apo dziva remvura ratanga kubuda.
Kana kana hove yatanga kutarisa isina kumira.
Kuchinja kwemvura hakusi zvose kamwe chete, asi hafu yepamusoro uye yakaitwa zvakare zuva rakatevera kusvika hove ichitarisa kumashure ichifambisa.
Iwe unobata sei nekatfish, izvo zvinowedzera kukura?
Zvikonzero zvakawanda zvekuwedzera kwekuntet catfish, kazhinji nokuti nzira yekudyisa haisi yakanaka uye kunaka kwezvokudya zvinopiwa kunewo zvishoma zvishoma.
Dambudziko rehukuru hwekudya mari inowanikwa munzvimbo dzakawanda.
Saka catfish varimi vanofanira kunge vachigadzira mukugadzira zvokudya zvavo.
Imwe nzira yekugadzirisa ndeyekugadzira imwe nzira yekudya kubva pamaggot.
Tsanangudzo yekuti ungaita sei zvimwe zvinopa zvokudya kubva kumagoggoni inogona kuonekwa pawebsite yeBFF yurie.
PaGoogle type yurie bsf kana kuti www.yuriebsf.com
Nzira yekuita dziva mvura yakachena sei?
Zvinotarisirwa hazvisi muvara wemvura yakasvibirira iyo inofanirwa, asi kune mhuka dzakawanda mhenyu mhenyu dziri padziva mvura iri kugadzirirwa.
Nokuti kuvepo kwezvipfuwo zviduku zvinorarama zvinoratidza kuti mvura yakanaka kuti tiparadzire mbeu.
Zvipfuwo zviduku zvakadai semaruva emumhino, zoo plankton nevamwe kunze kwemvura yakachena yekuparadzira hove uyewo zvimwe zvokudya zvehove pachayo.
Heino imwe nzira yekuita dziva mvura yakatsvuka.
Kuve nemvura yakachena, Mvura yakachena inogona kubva mumvura yakanaka kana pasi.
Kana pasina mvura yakanaka uye iwe unoda kushandisa mvura inobva pam pam mvura, inofanira kushandiswa kwemazuva masere kuitira kuti iron nesimbi zvisina kunaka zvigadzike kusvika pasi pegiyo.
Nhanho inotevera inofunganya nekuisa rimwe saga remumanyorera nekuisiya iro kwevhiki imwe kana maviri.
Probiotic administration inobatsirawo uye inobatsira kukurumidza kuisa mvura kumaruva.
Pashure pevhiki imwe chete kana maviri mvura inoshanduka ikasvibira uye kuchava nemujenya wemaruva uye mimwe mhuka duku.
Nzira yekugadzirisa sei matanda emvura?
Chimwe chezvikonzero zvinokonzera kupisa kwemvura ndeyekuti kuwanda kwehove mune dziva kwakakwirira.
Kana izvi zvikaitika, ita kuponda nekuparadzanisa kana kugovana hove mumadziva akasiyana.
Sei mazai mazhinji aripo, asi vakawanda vanofa?
Nhamba yevanhu vanofa inogona kuva nokuti unhu hwemai hahugadzi.
Saka, iva nechokwadi chokuti catfish brood stud inofanira kunge yakagadzirirwa.
Iva nechokwadi chokuti catfish broodstock kuchengetwa inofanira kupiwa high-protein feed uye kudya kwakakwana uye kunyatsotarisirwa vasati vaberekwa
Iwe unoita sei zvakasimba catfish maruru?
Ipa zvokudya zvakakosha zvakadai semaggot BSF.
Dyyisa mbeu iyo isati yatanga uye ipai ginger kana mashizha emupapaya nekucheka kuita zvidimbu zviduku sepbiotics yemavheti.
Tarisa 99 Nzvimbo yeMamwe Magote Mapoka!
Kunyange zvakadaro une mibvunzo?
Bvunza Yurie BSF
Nzira yekuita sei Sangkuriang 2019 Catfish